Shaqooyinka Lacag-bixinta Degdegga ah ee 18-jirka 2022 | Jawaabaha ugu Fiican
Bogga ugu weyn Shaqooyinka Bixinta Degdegga ah ee loogu talagalay 18-jirka da'doodu tahay 2022
Ma ogtahay inaad ka samayn karto lacag caddaan ah oo qabow adiga oo 18 jir ah shaqooyinkayaga lacagta badan? Shaqooyinkani waxay kaa caawin doonaan inaad dhisto kalsooni iyo inaad yeelato dareen madaxbannaan, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad ku tiirsanaato waalidkaa si aad u raacdo biilasha qaarkood.
Soo degitaanka shaqadii ugu horreysay ee dhalinyaro wuxuu astaan ​​u yahay madax-bannaanida iyo xorriyadda dhaqaale. Waxay u iftiimisaa isaga / iyada qiimaha dhabta ah ee lacagta.
Kuwani Shaqooyinka khadka tooska ah waayo dhalinyarada waa la heli karaa, wayna shaqeyn karaan dugsiga ka dib, waqtigooda firaaqada ah, ama dhamaadka usbuuca oo ay la socon karaan jadwal shaqo oo rogrogmi kara.
Ma tahay raadinaya xoogaa doolar ah kharash dheeraad ah? ama shaqooyin degdeg u bixinaya 18 jir? markaa waxaad timid meeshii saxda ahayd
Shaqooyin noocee ah ayaa ugu badan ee laga bixiyo 18-jirka?
Iyada oo ku saleysan cilmi baarisyo shaqo oo ay sameysay Maaliyadda Quarter-ka Koowaad, shaqooyinka ugu mushaharka badan 18-jirka waxay ku jiraan qaybaha soo socda:
xannaanada carruurta iyo xannaanooyinka
Kaaliyeyaasha heerka gelitaanka
Inta badan shaqooyinka kor ku qoran waxay u baahan yihiin khibrad yar ama aan lahayn dhallinta. Waxaa lagu taxay asal ahaan shaqooyinka gelitaanka, waxay weli ku siin doonaan lacag aad u fiican waqtigaaga iyo dadaalkaaga.
Shaqooyinkee 18-sano-jirku heli karaan?
Dhammaanteen waxaan ka soo bilownay meel, adiguna sidoo kale waxaad heli kartaa shaqo mushahar wanaagsan leh illaa intaad xooggaaga saareyso tamartaada inaad noqoto mid wanaagsan oo rajo leh. Buuxi codsiyada qaar, ku dadaal sida ugu fiican wareysi kasta, iyo ugu dhakhsaha badan, waxaad heli doontaa mushahar iyo helitaanka xirfadaha loo baahan yahay si loo helo xirfad aad ku faani karto
Boosaska heerka gelitaanka ayaa ah meesha aad ka bilaabi karto marka aad ku kasbato dariiqa jaranjarada. Markaad raadineyso xayeysiisyo shaqo, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad raadiso ereyo muhiim ah sida “heerka gelitaanka” ama “khibrad uma baahna”.
Waa maxay Noocyada Warshadaha ee Jagooyinka Heerka Gelitaanka u Jira 18 jirka?
Ikhtiyaarrada hoos ku taxan ayaa had iyo jeer shaqaaleysiiya dadka iyadoon wax khibrad ah loo baahnayn:
Warshadda iyo bakhaarka
Makhaayadaha iyo cuntada degdegga ah
Shaqooyinka tafaariiqda iyo adeegga macaamiisha
Ma heli karaa Xirfad Lacag-bixineed oo Dheeraad ah Anigoon Kuleejka aadin?
Haa, waad awoodaa In kasta oo ay ku xidhan tahay xirfadihii aad hore u soo baratay, ha ahaato ICT ama xirfado Xirfadeed.
Marka loo eego ICT, waxaan ula jeednaa, xirfadaha la xiriira sayniska kombiyuutarka oo ay ku jiraan dayactirka softiweerka, dayactirka qalabka iyo dayactirka, barnaamijyada, horumarka webka iwm.
Xirfadaha xirfadda leh waxaan ula jeednaa, shaqooyin kuu oggolaanaya inaad gacmahaaga ku shaqayso, laakiin u baahan tababar iyo takhasus gaar ah. Caadi ahaan, dadka ku jira jagooyinka xirfadaha xirfadda leh waxay dhigtaan dugsi ganacsi ama kulliyad jaaliyadeed, waxay kasbadaan shahaado oo waxay haystaan ​​tababar shaqo.
In kasta oo laga yaabo inaad u baahatid inaad dhigatid iskuulka farsamada kahor intaadan helin shaqo xirfadeed xirfad sare leh, shirkadaha qaar waxay bixiyaan tababar shaqo ama tababar shaqo, taas oo kuu ogolaaneysa inaad kasbato xirfadaha aad ugu baahan tahay inaad ku horumariso xirfaddaada. Haddii aad horey u laheyd xirfad gaar ah, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad shaqo hesho adigoon dhigan dugsiga ganacsiga.
Ma la ii oggol yahay inaan shaqeeyo shan maalmood usbuucii Anigoo 18 jir ah?
Dhalinyar ahaan, sharcigaaga ayaa u oggol inuu u shaqeeyo inta itaalkaagu u oggol yahay. Ma hubo inuu sharci ka jiro meel kasta oo ka xayiraya + 18-ka inay shaqeeyaan saacado badan haddii ay rabaan. In kasta oo ay jiraan waxoogaa reebban inkasta oo (tusaale ahaan, uma shaqeyn kartid baarka baarka illaa aad 21 sano ka gaarto gobollo badan oo Mareykanka ah).
Sideen ku Helaa Shaqo Aan Lahayn Dibloom ama Khibrad Shaqo?
Si aad u bilowdo xirfad waxay noqon kartaa mid culus oo cabsi leh. Markaad isku dayeyso inaad hesho shaqadaada ugu horreysa, meel fiican oo laga bilaabo waa hay'ad shaqaale ah, halkaas oo shaqooyinka muddada-gaaban iyo muddada-dheer sida caadiga ah laga heli karo. Shaqaaleeye ayaa kula shaqeyn doona si uu kuugu helo fursada ugu fiican ee aad iskudaydo inaad ka shaqeyso warshad gaar ah ama aad bilowdo xirfadaada. Waa hab fiican oo lagu kasbado khibrada aad u baahan tahay si aad mustaqbalkaaga ugu horumariso.
Ha niyad jabin haddii shaqaaleeye uusan ku soo wicin isla markiiba .Sidii aan horay u sheegay, kaliya noqo mid wanaagsan oo adkaysi leh. Ugu dambeyntiina, yeelashada anshax shaqo oo weyn, dabeecad bislaansho iyo rabitaan wax lagu barto ayaa laga yaabaa inay ka qiimo badan tahay nooc kasta oo xirfad adag ah.
Ma jiraan shaqooyin toos ah oo sharci ah oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 18-sano jir?
In kasta oo ay jiraan xaqiiqooyin inay jiraan shaqooyin been abuur ah oo internetka ah oo dibadda u jooga inay waqtigaaga kaa lumiyaan ama wax yar oo aad horayba u haysteen kaa dhacaan, haddana weli waxaa jira shaqooyin qadka toos ah oo sharci ah oo loogu talagalay 18-jirka.
In kasta oo qaarkood ay hagaagsan yihiin, kuwa kale waxay ku siin doonaan dabacsanaan aad u badan, waxay ku bari doonaan xirfad wax lagu beddeli karo oo waxtar leh ama laba, waxayna kaa dhigi doonaan lacag badan.
Waa kuwan liistada 5 shaqooyinka khadka tooska ah ee loogu talagalay carruurta 18 sano jir ah oo si sahlan loo geli karo loona bixiyo si la yaab leh si fiican.
#1 Ku Iibi Alaabta onlayn
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah goobaha iibinta internetka halkaas oo aad ku iibin karto alaabtaada oo aad ku samayn karto lacag caddaan ah. Waxyaabaha lagu iibiyo onleenka way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran waxaad damacsan tahay inaad iibiso, iyo inta badan meheradan tafaariiqda/baayacmushtarka waxay u oggolaanayaan 13 sano iyo ka kor inay ku biiraan.
Etsy, Guddoomiyaha Iibi Alaabta Guriga Lagu Sameeyo, Farshaxanka, iyo Guryaha Guryaha.
Suuqa Suuqa, craigslist. - Iibi gudaha, alaab duug ah, alaab aan loo baahnayn.
Amazon, Arbacada ah. - Iibi wax walba.
# 2 Alaabada Tijaabada
Ma ogtahay inaad tijaabin karto alaabada oo lacag lagaa siin karo? Tani gebi ahaanba waa RUN maxaa yeelay magacyadu waxay kireystaan ​​shirkado si ay u helaan dad tijaabiya wax soo saarkooda. Waxay sidan u sameeyaan si ay u helaan jawaab celin si ay alaabtooda u fiicnaato.
Ka sokow inay lacag ku siiyaan tijaabinta badeecadaha, waxay bixiyaan sahanno si ay u helaan ra'yigaaga ku saabsan badeecadaha kala duwan. Waa inaad jirtaa 16 sano si aad ugu qalanto.
Hal shirkad oo aad ku kalsoonaan karto arrintan waa Kaarka Warbixinta Alaabta or ADIGA
# 3 Fiverr
Fiverr waa suuqa internetka ee loogu talagalay adeegyada iskaa wax u qabso ah. Shaqaale -yaqaanka ayaa hubaal ah inay gaari doonaan suuqa caalamiga ah iyada oo loo marayo madalkan. Madalkani waa u bilaash inuu ku biiro, waxaana jira wax badan oo aad samayn karto si aad dakhli u samayso sida: Soo bandhig ebooks ama warbixino aad qortay, Sii adeegyada warbaahinta bulshada, Abuur sawirro dhijitaal ah iibka, qor waxyaabaha, nuqullada xayeysiiska qabyada ah, iwm .
Sideen ku noqonkaraa wariye madax banaan Fiverr?
Way fududahay, laga bilaabo Bogga hoyga Fiverr Guji noqo Iibiye, Ku qor cinwaanka emaylkaaga oo guji Continue. Xusuusin: Waxaad sidoo kale ku biiri kartaa koontooyinka Facebook iyo Google. Ka dibna dooro magaca isticmaalaha iyo furaha sirta, guji ku biir oo waad fiicantahay inaad tagto.
# 4 Saameynta warbaahinta bulshada
Miyaad aad ugu firfircoon tahay warbaahinta bulshada? Ma taqaanaa sida loo quudiyo farriimaha ku jira baraha bulshada ee soo ururiya tan oo ah fiiro gaar ah? Markaa waxaad haysataa wax kasta oo ay ku qaadato si loogu beddelo koontooyinkaaga warbaahinta bulshada ganacsi ganacsi oo kuu horseedi doona jeeg mushahar ah. Waad heli kartaa dareenka calaamadaha oo lacag ayaa lagu siin karaa.
Xusuusinta mudan waa in badan oo ka mid ah siyaabaha caadiga ah ee lacag looga sameeyo kororka dhagaystayaasha, sida YouTube ama xayeysiiska AdSense, waxay leeyihiin ugu yaraan da'da looga baahan yahay 18 (ama oggolaanshaha waalidka ayaa loo baahan yahay).
# 5 Nashqadeeyaha Shabakada
Shakhsi kasta iyo meherad kastaa waxay rabaan inay yeeshaan degel si kor loogu qaado oo loo maamulo meherado, is dhexgal, qoysaska loo wada hayo, iyo xitaa madadaalo kaliya. Sidaa darteed, waxay raadsadaan adeegyada naqshadeeye webka si ay u rumeeyaan riyadooda. Si aad u noqoto naqshadeeye shabakad, waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof hal -abuur leh oo aqoon u leh ficilka dhisidda mareegaha adoo adeegsanaya softwares.
Marka, haddii aad haysato waxa ay ku qaadanayso inaad noqoto naqshadeeye websaydh, kani waa mid ka mid ah shaqooyinka mushaharka sare leh ee loogu talagalay 18 jirka. Dhismaha mareegaha wuxuu u baahan yahay xirfad, aqoon, iyo dulqaad.
Naqshadeeyayaasha bogga waxay sameyn karaan lacag aad u badan. Dhamaadka hoose ee miisaanka mushaharku waa qiyaastii $ 62,000 sanadkii. Bixinta waxaa go'aamiya kakanaanta bogga.
Markaad qaadatid masuuliyado maaliyadeed oo dheeri ah, waxaad u baahan doontaa ilo dakhli oo dheeri ah oo ka baxsan gunnada toddobaadlaha ah. Waqtigana waxaan uqaadanay inaan kuu tilmaamno dhanka saxda ah.
Shaqooyinkaas badankood waxay ubaahan yahiin khibrad yar ama aan lahayn si ay uqaabiyaan shaqaalaha da'da yar.
Haddii aad u aragto maqaalkan mid waxtar leh oo xiiso leh, HA ILAAWIN inaad faallo ka bixiso oo aad la wadaagto asxaabta!
Dib -u -eegista Ibotta 2022: Ibotta Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Maxay Tahay Miisaaniyaddayda Dheeman Habka ugu Fiican ee Loo Iibiyo Giraan Dheeman 2022
Meelaha lagu Iibiyo Dahabka Dahabka ah ee Khadka Tooska ah ee Dalabka ugu sarreeya sanadka 2022
barnaamijyada lacag sameynta
Waa maxay Litecoin? Qiimaha, Dulmarka iyo Sida ay u shaqeyso
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Siin Karo Baabuur Wadista Dalka 2021 -ka
Iyadoo dadku ay muujinayaan habab kala duwan oo ay lacag ku sameeyaan, miyaad aaminsan tahay in lagu siin karo lacag aad ku kaxayso baabuur…
Sida lacag looga helo Robocalls sanadka 2022
Dhammaanteen waxa nagu soo dhacay robocalls qof walbana waxa uu u muuqdaa mid qaati ka taagan. I ogolaw inaan ku tuso sida loo sameeyo…
Lacag ku sameynta hantida maguurtada ah waxay u baahan tahay samir iyo go'aan. Waxay noqon kartaa mid halis ah oo dhib badan, laakiin badiyaa…
Hadda Lacag baan u Baahanahay !!! Raac talaabooyinkan fudud si aad lacag u hesho
Aniguna halkaas ayaan joogay. U kaydinta lacag waxbarashadaada si looga fogaado amaahda ardayga, daryeelka qoyska, helidda…
Ma lagu siiyaa lacag si aad u noqoto waalid koriya? Fursadaha Adiga 2021
Noqoshada waalid korinta waxay noqon kartaa hawl culus waxayna u baahan tahay dhaqaale badan si ay ula qabsato. Iyadoo la tixgelinayo…